Home Wararka Qoor Qoor oo cabsi darteed safarkiisii shalay u baajiyay iyo Al Sunna...
Qoor Qoor oo cabsi darteed safarkiisii shalay u baajiyay iyo Al Sunna oo dib u soo laba kacleysay
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmad Qoor Qoor ayaa maalintii labadaad ka baaqsaday in uu ka dego garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusameed cabsi la soo daristay darteed. Labo habeen ka hor ayaa ay ahayd markii garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb lagu garaacay dhowr hoobiyayaal kuwaas oo ku dhacay bartamaha garoonka.
Inkastoo ay Ururka Al Shabaab sheegatay in ay mas’uul ka tahay weerarkaas hadana waxa la sheegayaa in weeararkaas ay soo qaadeen qaar kamida ururkii Al Sunna Wajameeca oo asbuucayadii u danbeeysay ku jiray diyaar garoow ciidan iyo dib isku abaabul cusub.
Al Sunna ayaa horay u sheegtay in ay tahay waxa aan la qaadan karin in degaankii ay culumo badan u shahiiday xurayntiisa ay haatan la wareegeen ururka Al Shabaab. Ururka Al Shabaab ayaa gacanta ku dhigay degaano ay ka mida tahay bacaadweyn iyo Baxda oo ay hada Al Shabaab toos uga taliso.
Ma jirto mas’uuluyiin ka tirsan Dowlad Goboleedka Galmudug oo iska xilsaartay ama ay dareen ku hayso awooda ururka Al Shabaab oo dib uga soo cusboonaatay deeganada hoos tago DG Galmudug. Iskaba daa in la xureeyo deegaano hor leh, waxaa sii lumya kuwii ay ururka Al Sunna horay u xoreeysay.
Ururka Al Sunna oo dareemayo in ay khatar ku jiraan degaanadii ay deganayeen ayaa hada dib u bilaabay is aruursi ciidan iyo abaabul keeni doono in ay dib ula wareegaan gabi ahaanba Dowlad Goboleedka Galmudug.
Dhanka kale Madaxweyne Qoor Qoor ayaa isku badalay duqa malagaalada Muqdisho madaama uusan waqto galin mas’uuliyadii horay loogu doortay. Waxa uuna waqtigiisa inta badan uu ku lumiyay joogitaanka Muqdisho iyo ka shaqaynta howlada dowlada Federaalka iyada oo gabi ahaanba baarlaamka Galmudug albaaba loo xiray.